Cunnooyinka daawada dhaqanka | February 2020
Ugu Weyn Ee Cunnooyinka daawada dhaqanka
Dhammaan sifooyinka faa'iido leh ee mandarooyinka iyo iska horimaadyada
Mandarin waa geedka qulqulka leh ee qiyaas dhexdhexaad ah (ilaa afar mitir oo dherer) ama baadiyaha. Miraha citrus waxay gaartaa lix santimitir oo wareeg ah. Qaababka miro waxay u egtahay kubbadda sareysa ee kor ku xusan. Maqaarka midhaha waa khafiif, oo si dabiici ah ugu xiran xarumaha. Miro ayaa ka kooban 8-13 xaleef, casiir leh ama macaan ama macaan oo macaan.
Suuriyaasha Suuriya waxba kuma laha Suuriya, maadaama ay caqabad ku noqotay isaga oo la dhajiyay gurra, oo ah warshad Bariga Dhexe. Warshadkan waxaa sidoo kale loo yaqaan cawska caansan, waana dakhligan. Qolofka Syriac-ka wuxuu soo galaa qoyska Kutrov waxaana uu leeyahay sharaxaad soo socota: Geedku wuxuu koraa 2 m, caleemihiisuna way ballaaran yihiin, waxay u egtahay ukun qaab ah waxayna koraan ilaa 25 cm oo dherer ah iyo 12 cm width.
Goorma ayaan qaadan karaa, maxaa faa'iido leh iyo sida loo karsado faleebo ba'an
Kalluunka waa mid ka mid ah noocyada duurjoogta ah ee ku xoortay geedaha Pink. Inkastoo, si aad u wacdo warshadkan duurjoogta ah hadda maahan mid sax ah, tan iyo inta badan guryaha iyo xagaaga ee xagaaga waxaa horey loogu koray dhaqan ahaan. Aynu ka hadalno sifooyinka wanaagsan ee duurjoogta, gaar ahaan, ku saabsan faleebo qaybo ka mid ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cunnooyinka daawada dhaqanka 2020